Soo saaraha ugu fiican ee soo saaraha matoorrada iyo warshad | Hadal
Qalabka gawaarida ee loo yaqaan 'Tranvel gearbox gear' oo lagu dhajiyay matoorrada korantada iyo qalabka gargaarka. Waxay ka kooban tahay naqshad kooban, miisaan fudud, cadaadis shaqo oo sarreeya, xasillooni wanaagsan. Tikniyoolajiyad cusub oo marsho ah iyo haydarooliga ayaa damaanad qaadaya nolosha dheer. Xuddunta wax soo saarka: 7.5-620KNm Haydaroolin Gudbinta Khadka taxanaha Y ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa injineernimada dhismaha, mashiinnada tareenka, mashiinnada waddooyinka, mashiinnada markabka, mashiinnada batroolka, mashiinnada dhuxusha laga soo saaro, iyo mashiinnada metallurgy. Y4 Taxanaha idaacadaha Haydarooliga 'saarka wax soo saarka ...
Qalabka gawaarida ee loo yaqaan 'Tranvel gearbox gear' oo lagu dhajiyay matoorrada korantada iyo qalabka gargaarka. Waxay ka kooban tahay naqshad kooban, miisaan fudud, cadaadis shaqo oo sarreeya, xasillooni wanaagsan. Tikniyoolajiyad cusub oo marsho ah iyo haydarooliga ayaa damaanad qaadaya nolosha dheer.
Wareejinta Haydarooliga Wadayaasha Y taxanaha waxaa si balaaran loogu adeegsadaa injineernimada dhismaha, mashiinada tareenka, mashiinada wadada, mashiinada markabka, mashiinada batroolka, mashiinada dhuxul dhagaxda, iyo mashiinada qashinka. Y Taxanaha gudbinta Haydarooliga 'usheeda dhexe ee wax soo saarku wuxuu qaadi karaa radial weyn oo bannaanka ka baxa iyo xajmiga foosha. Waxay ku ordi karaan cadaadis sarreeya, cadaadiska dhabarka ee la oggol yahayna waa illaa 10MPa iyadoo lagu jiro xaalado shaqo oo joogto ah. Cadaadiska ugu badan ee la oggol yahay ee sanduuqoodu waa 0.1MPa.
Gudbinta Haydarooliga waxay ka kooban tahay matoor Haydarooliga, sanduuqa meeraha meeraha, bareega disc （ama aan-jejebin） iyo qeybiyaha howlaha badan. Saddex nooc oo usheeda dhexe wax soo saar ah ayaa loogu talagalay xulashooyinkaaga. Wax-ka-beddelka lagu habeeyay ee ku-talo-galka ah ayaa la heli karaa daqiiqad kasta
Raadinta Kumbiyuutarka Gawaarida 18000 waxay muujinayaan waxtarka shaqada ee sarreeya, adkeysiga, kalsoonida weyn, naqshadeynta istiraatiijiga ah, cadaadiska shaqada ee sarreeya iyo xakamaynta xawaaraha-xawaaraha yar. Noocyada wareejinta kiiska-wareejinta ma aha oo kaliya in si toos ah loogu dhex rakibo gudaha gurguurta ama giraangirta, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa madaxa wadada ama mashiinka wax lagu shiido ee mashiinnada rogista korontada. Intaas waxaa sii dheer, cabbirada iyo waxqabadka farsamo ee darawaladayada waxay la jaan qaadayaan Nebtesco, KYB, Nachi, iyo TONGMYUNG. Sidaa darteed, darawalkeenu wuxuu bedel fiican u noqon karaa badeecooyinkaas.
Mashiinka socdaalkani wuxuu ka kooban yahay bistoolad barokac beddelaad beddelaad ah, bareeg kala duwanaan badan, maareynta meeraha iyo baloogga shaqeynaya. Wax-ka-beddelka lagu habeeyay ee ku-talo-galka ah ayaa la heli karaa daqiiqad kasta.
Gudbinta Haydarooliga Halbeegyada Muhiimka ah ee Wadayaasha:
Model Wadarta Barakaca (ml / r) Xuddunta lagu qiimeeyay (Nm) Xawaare (rpm) Model Model Model Gearbox Qaabka Biriigga
Hore: Haydarooliga qulqulaya meeraha meeraha
Xiga: Winch Haydarooliga
Gawaarida Socdaalka ee Haydarooliga
OEM kartoo Made in Shiinaha Bekwell 30L Plasti ...
ODM qeybiye Shiinaha Bekwell20-220L PE caaga Op ...
Qiimaha ugu fiican ee Shiinaha Karti Sare AC Single P ...
Hot Products New Shiinaha Custom dhisay Rubber Craw ...